ရုရှားသမ်မတပူတငျကို အမရေိကနျသမ်မတ ဂြိုးဘိုငျဒငျ သတိပေး - What's Today
ရုရှားသမ်မတပူတငျကို အမရေိကနျသမ်မတ ဂြိုးဘိုငျဒငျ သတိပေး – What’s Today
ရုရှားက ယူကရိနျးကို ကြူးကြျောသိမျးပိုကျခဲ့မယျဆိုရငျ တနျဖိုးကွီးကွီး ပွနျပေးဆပျရမှာ ဖွဈပွီး စီးပှားရေးအရ ဆိုးရှားတဲ့အကြိုးဆကျတှနေဲ့ပါ ရငျဆိုငျရမယျလို့ ရုရှားသမ်မတ ဗလာဒီမာပူတငျကို အမရေိကနျသမ်မတ ဂြိုးဘိုငျဒငျက သတိပေးပွောကွားလိုကျပါတယျ။…
ရုရှားက ယူကရိနျးကို နယျမွကြေူးကြျောခဲ့ရငျ အမရေိကနျရဲ့ ခွလေငျြတပျတှကေို စလှေတျဖို့ ရှိသလားဆိုတဲ့ မေးခှနျးကိုတော့ သမ်မတဘိုငျဒငျက အစီအစဉျ မရှိသေးဘူးလို့ ဒီဇငျဘာ ၁၁ ရကျနမှေ့ာ သတငျးထောကျတှကေို ပွောပါတယျ။…
ဒါပမေဲ့ လုံခွုံရေးလိုအပျခကျြအရ အမရေိကနျနဲ့ နတေိုး မဟာမိတျတပျဖှဲ့တှဟော အရှဘေ့ကျကို တပျတှေ စလှေတျဖို့ လိုအပျမယျလို့ ပွောပါတယျ။…
ယူကရိနျး အရေးနဲ့ပတျသကျလို့ ပူတငျကို ရှငျးရှငျး လငျးလငျးပွောခဲ့တာက ခွလှေမျးတှေ ဆကျတိုးနမေယျဆိုရငျ ရုရှားစီးပှားရေးမှာ ဆိုးဆိုးရှားရှား၊ အလှနျ ဆိုးဆိုးရှားရှား အကြိုးသကျရောကျမှုတှကွေုံစရေမယျ ဆိုတာပါပဲလို့ သမ်မတ ဘိုငျဒငျက ပပွောပါတယျ။….
သမ်မတ ဘိုငျဒငျဟာ အရငျတပတျက သမ်မတ ပူတငျနဲ့ ၂ နာရီကွာအောငျ တယျလီဖုနျး စကား ပွောဆိုခဲ့ပွီး ရုရှားက ယူကရိနျးကို ကြူးကြျောမယျဆိုရငျ ကမ်ဘာမှာ ရုရှားရဲ့ နရောဟာ သိသိသာသာ ပွောငျးလဲသှားလိမျ့မယျလို့ သတိပေးခဲ့ပါတယျ။….
ရုရှားက ယူကရိန်းကို ကျူးကျော်သိမ်းပိုက်ခဲ့မယ်ဆိုရင် တန်ဖိုးကြီးကြီး ပြန်ပေးဆပ်ရမှာ ဖြစ်ပြီး စီးပွားရေးအရ ဆိုးရွားတဲ့အကျိုးဆက်တွေနဲ့ပါ ရင်ဆိုင်ရမယ်လို့ ရုရှားသမ္မတ ဗလာဒီမာပူတင်ကို အမေရိကန်သမ္မတ ဂျိုးဘိုင်ဒင်က သတိပေးပြောကြားလိုက်ပါတယ်။…
ရုရှားက ယူကရိန်းကို နယ်မြေကျူးကျော်ခဲ့ရင် အမေရိကန်ရဲ့ ခြေလျင်တပ်တွေကို စေလွှတ်ဖို့ ရှိသလားဆိုတဲ့ မေးခွန်းကိုတော့ သမ္မတဘိုင်ဒင်က အစီအစဉ် မရှိသေးဘူးလို့ ဒီဇင်ဘာ ၁၁ ရက်နေ့မှာ သတင်းထောက်တွေကို ပြောပါတယ်။…
ဒါပေမဲ့ လုံခြုံရေးလိုအပ်ချက်အရ အမေရိကန်နဲ့ နေတိုး မဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့တွေဟာ အရှေ့ဘက်ကို တပ်တွေ စေလွှတ်ဖို့ လိုအပ်မယ်လို့ ပြောပါတယ်။…
ယူကရိန်း အရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ ပူတင်ကို ရှင်းရှင်း လင်းလင်းပြောခဲ့တာက ခြေလှမ်းတွေ ဆက်တိုးနေမယ်ဆိုရင် ရုရှားစီးပွားရေးမှာ ဆိုးဆိုးရွားရွား၊ အလွန် ဆိုးဆိုးရွားရွား အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေကြုံစေရမယ် ဆိုတာပါပဲလို့ သမ္မတ ဘိုင်ဒင်က ပပြောပါတယ်။….
သမ္မတ ဘိုင်ဒင်ဟာ အရင်တပတ်က သမ္မတ ပူတင်နဲ့ ၂ နာရီကြာအောင် တယ်လီဖုန်း စကား ပြောဆိုခဲ့ပြီး ရုရှားက ယူကရိန်းကို ကျူးကျော်မယ်ဆိုရင် ကမ္ဘာမှာ ရုရှားရဲ့ နေရာဟာ သိသိသာသာ ပြောင်းလဲသွားလိမ့်မယ်လို့ သတိပေးခဲ့ပါတယ်။….
Previous Article ကွတ်ခိုင်မှာ အမျိုးသမီးတစ်ဦးကို အဓမ္မပြုကျင့်ခဲ့တဲ့ စစ်သားကို ထောင်ဒဏ် ၂၀နှစ် ချမှတ်လိုက်တယ်လို့ စစ်ကောင်စီ ထုတ်ပြန်
Next Article လေယာဉ်ကွင်းတွင် နိုင်ငံကူးလက်မှတ်ပြသစဉ် သူမ၏ရုပ်ရည်ကြောင့် အသက်မပြည့်သေးဘဲ လက်မှတ်အတုပြသည်ဟုဆိုကာ အဖမ်းခံခဲ့ရသည့် အသက် 46 နှစ်အရွယ်အမျိုးသမီး